Ngomhla we-23 kuMeyi weZodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Ngomhla wama-23 kuMeyi uZodiac yiGemini-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Ngomhla wama-23 kuMeyi uZodiac yiGemini-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ngoMeyi 23 yiGemini.
Uphawu lweenkwenkwezi: Amawele . Olu phawu lucebisa abantu abanobuntu kunye nobushushu. Luphawu kubantu abazelwe phakathi kukaMeyi 21 noJuni 20 phantsi komqondiso weGemini zodiac.
Inkqubo ye- IGemini Constellation ebonakalayo phakathi kwe + 90 ° ukuya -60 ° yenye yeenkwenkwezi ezili-12 zodiac. Inkwenkwezi yayo eqaqambe kakhulu yiPollux ngelixa igubungela indawo eyi-514 sq degrees. Kubekwe phakathi kweTaurus ukuya eNtshona kunye neCancer ukuya eMpuma.
Igama lesiFrentshi liyibiza ngokuba yiGémeaux ngelixa amaGrike ekhetha eyabo iDioscuri, nangona kunjalo imvelaphi yomqondiso we-zodiac kaMeyi 23, amawele, yiLatin Gemini.
Uphawu olwahlukileyo: Sagittarius. Olu luphawu ngqo ngqo kwisangqa se-zodiac ukusuka kumqondiso we-Gemini zodiac. Iphakamisa unxibelelwano kunye nefilosofi kwaye ezi zimbini zithathwa njengezenza ubudlelwane obukhulu.
Ukuziphatha: Imfono. Lo mgangatho ucebisa ubungakanani bokwanda kwabo bazalwa nge-23 kaMeyi kunye nokuzimisela kwabo kunye nococeko kuninzi lobomi.
Indlu elawulayo: Indlu yesithathu . Le ndlu ilawula unxibelelwano lomntu, lonke unxibelelwano kunye nokuhamba. Njengoko ikule ndlu, iGemini iyathanda ukuthetha, ukudibana nabantu abatsha kunye nokwandisa indalo yonke. Ewe kunjalo, abaze bathi hayi kweli thuba lokufumana indawo entsha.
Umzimba olawulayo: Imercury . Lo mzimba wasezulwini kuthiwa unefuthe lokuqina kunye nokungqala. Ikwafanelekile ngokwembono yokucoceka. Imercury iyahambelana neHermes evela kwiintsomi zamaGrike.
Isiqalelo: Umoya . Eli nqaku licebisa amava obomi kwimibandela eyahlukeneyo kunye nemeko yokuguquguquka kubo bonke abo bazalwe ngoMeyi 23. Xa inxulunyaniswa nezinye izinto ezintathu, inokuba iyabashushu, ibenze ibe ngumphunga okanye ibaminxe.
Usuku lwethamsanqa: uLwesithathu . Olu lusuku olulawulwa yiMercury, ke ngoko lujongana nokungafaniyo kunye nokutshintshiselana. Iphakamisa imeko yokunxibelelana kwabemi beGemini.
Amanani anethamsanqa: 1, 4, 16, 18, 26.
Ulwazi oluthe kratya ngoMeyi 23 Zodiac ngezantsi ▼
ILibra ngoNovemba 2020 yeHososcope yeNyanga
I-Rooster Man Dragon Woman ixesha elide ukuhambelana
venus kwi-scorpio indoda ethandweni
Indoda ye-scorpio kunye nebhinqa le-capricorn
Umhlaza welanga kunye nenyanga ye-aquarius
Libra indoda kunye ne-scorpio
mercury endlwini 9
I-pisces man aries ubuhlobo bomfazi